Sina Môtô tsy mitambatra dingana telo ho an'ny ozinina paompy sy mpamatsy | Leadrive
Ny motera asynchronous amin'ny dingana telo ho an'ny paompy dia vokatra matihanina amin'ny paompy. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fanitarana zana-kazo manokana, tsy dia mihetsika intsony, azo ampiasaina azo antoka, fikojakojana mety, sns. Izy io dia ny mitondra fiara isan-karazany amin'ny fantsom-pahefana ho an'ny paompy.
Motera manokana ho an'ny paompy fantsona dia mizara ho karazany roa: andian-dahatsoratra mahazatra sy andiam-porofo mipoaka.
Ny taham-pamokarana ny motera manokana ho an'ny paompy dia mizara ho vy tsotra sy vy tsy misy fangarony.
◎ Frame No: 80-355
Previous: Môtô asynchronous dingana telo ho an'ny reducer
Manaraka: Môtô asynchronous dingana telo ho an'ny fikolokoloana vato sy ny fanapahana
Môtô asynchronous dingana telo ho an'ny reducer